Markhaatiyaasha Yehowah Shirarka Waaweyn Maxay u Aadaan?
Shirarka Waaweyn Maxaan u Aadnaa?
Fiiri dadkan. Maxay farxad wejiyadooda uga muuqataa? Waxay joogaan shirarkeenna mid ka mid ah. Ilaahay addoommadiisii hore sanadkii saddex goor buu amray inay isku yimaadaan. Sidaas oo kale baan u xiiseynaa inaan innagoo badan isku imanno. (Sharciga Kunoqoshadiisa 16:16) Sanad walba waxaan helnaa saddex shir oo kala duwan. Sanadkii laba goor waxaan helnaa shirka degmada oo hal maalin la qabto. Sanad walbana waxaan helnaa shirka goboleed oo saddex maalmood socda. Maxaan ka dheefnaa ururradan?
Waxay xoojiyaan walaaltinnimadeenna. Reer binu Israaʼiil way ku farxeen inay Yehowah “shirarka dhexdooda” ku ammaanaan. Sidoo kale innagana aad baan ugu faraxnaa markaan dhacdooyinkan gaarka ah Ilaahay ku wada caabudno. (Sabuurradii 26:12; 111:1) Ururradan waxay ina siiyaan fursad aan ku baranno Markhaatiyaasha kiniisadaha kale ka tirsan xitaa kuwa ka yimid dalal kale. Duhurkii shirka meesha lagu qabto baan ku wada qadeynaa siduu jawiga asaxaabnimada u kordho. (Falimaha Rasuullada 2:42) Meelahaas toos baan uga aragnaa jacaylka mideeyay ‘walaalaha’ adduunkoo dhan.—1 Butros 2:17.
Waxay kordhiyaan xiriirkaan Ilaahay la leenahay. Reer binu Israaʼiil aad bay u faaʼiidaysteen markay “garteen erayadii” loo micneeyay ee ku qornaa Qorniinka Quduuska ah. (Nexemyaah 8:8, 12) Innagana sidaas oo kale baan u qiimeynaa tilmaanta Kitaabka Quduuska ah oo aan ka helno shirarkeenna. Shir walba wuxuu ku salaysan yahay aayad Kitaabka Quduuska ah laga soo qaaday. Khudbado xiiso leh iyo matallo baan ka barannaa sidaan Ilaahay doonistiisa nolosheenna ugu sameyno. Aad bay inoo dhiirrigelisaa markaan maqalno sheekooyinka walaalaheenna Kirishtaanka ah oo ka guuleystay dhibaatooyinka maalmahan jira. Shirarka goboleed waxaa lagu qabtaa riwaayado dhar gooni ah lagu matalo oo sheekooyinka Bibleka ku jira shida oo casharro waxtar leh ina bara. Shir walba waa la baabtiisaa kuwa rabo inay dadka u muujiyaan inay noloshooda Ilaahay siiyeen.
Maxay shirarka u yihiin waqtiyo gaar ah oo farxad badan?
Sidee baad uga faaʼiidaysan kartaa booqashada shirarka?
Haddaad rabtid inaad walaalaheenna baratid imow shirkeenna soo socdo. Macallinkaaga Bibleka ayaa ku tusi kara barnaamij sidaad u aragtid waxa laga hadlo. Qor taariikhda meesha iyo waqtiga shirka dambe oo imow haddaad awooddid.
Wadaag Wadaag Shirarka Waaweyn Maxaan u Aadnaa?
Markhaatiyaasha Yehowah Maxay Shirarka Waaweyn u Aadaan?